चौधौं दलाई लामा - विकिपिडिया
चौधौँ दलाई लामा तेन्जिङ ग्यात्सो
तेन्जिङ ग्यात्सो (६ जुलाई, १९३५ - वर्तमान) चौधौँ दलाई लामा आध्यात्मिक गुरू हुन्। उनको जन्म ६ जुलाई, १९३५को उत्तर-पूर्वी तिब्बतको ताकस्तेर क्षेत्रमा येओमान परिवारमा भएको थियो। दुइ वर्षको उमेरमा बालक ल्हामो धोण्डुपको पहिचान १३औं दलाई लामा थुप्तेन ग्यात्सोको अवतारको रूपमा गरियो। दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी हो जसको मतलब हुन्छ ज्ञानको महासागर र दलाई लामाको वंशज करूणा, अवलोकेतेश्वरको बुद्धको गुणहरूको साक्षात रूप भएको मानिन्छन्।
२ नेतृत्वको दायित्व
३ लोकतंत्रकरणको प्रक्रिया
४ शांति प्रयास
५ दलाई लामाको लोकप्रियता
६ दलाई लामाको संदेश
उनले आफ्नो मठवासीय शिक्षा छ वर्षको उमेरमा प्रारंभ गरे। २३ वर्षको उमेरमा वर्ष १९५९को वार्षिक मोनलम ;प्रार्थनाद्ध उत्सवको समयमा उनले जोखांग मन्दिर, ल्हासामा आफ्नो फाइनल परीक्षा दिए। उनले यो परीक्षा ओनर्स नजिकै गरे र उनलाई सर्वोच्च गेशे डिग्री ल्हारम्पा ; बौध दर्शनमा पी. एच. डी. प्रदान गरियो।
नेतृत्वको दायित्व[सम्पादन गर्ने]
वर्ष १९४९मा तिब्बतमा चीनको हमला पछि दलाई लामा लाई सम्पूर्ण राजनीतिक सत्ता सुम्पन भनियो। १९५४मा उनी माओत्सेतुङ, देङ जियोपिंग जस्ता धेरै चीनियाँ नेतासँग वार्ता गर्न लागि बेइजिङ पनि गए। तर आखिर वर्ष १९५९मा ल्हासामा चीनियाँ सेनाहरू द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय आन्दोलनको दवाइएपछि उनी निर्वासनमा जान लाई बाध्य भए। सन् १९५९मा उनी भारतको शरणमा गए। भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले उनलाई उत्तर भारतको शहर धर्मशालामा बस्ने व्यवस्था मिलाईदिए। उनी अहिलेसम्म पनि भारतको धर्मशालामा नै बस्दै आइरहेका छन्। निर्वासित तिब्बत सरकारको केन्द्रिय प्रशासनको मुख्यालय पनि धर्मशालामा नै छ। तिब्बतमा चीनको हमला पछि दलाई लामा लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले तिब्बत मुद्दा सुल्झाउन अपील गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा द्वारा यस सम्बन्धमा १९५९, १९६१ र १९६५मा तीन प्रस्ताव पारित भैसकेका छन्।
लोकतंत्रकरणको प्रक्रिया[सम्पादन गर्ने]
१९६३ मा दलाई लामाले तिब्बतको लागि एक लोकतांत्रिक संविधानको प्रारूप प्रस्तुत गरे। यसपछि ले यसमा धेरै सुधार गरे। हुनत, मे १९९० मा सम्म नै दलाई लामा द्वारा गरियो मूलभूत सुधारहरू लाई एक वास्तविक लोकतांत्रिक सरकारको रूपमा वास्तविक स्वरूप प्रदान गरे जा सका। यस वर्ष अब सम्म द्वारा नियुक्त हुने तिब्बती मंत्रिमंडल; काशग बढी दसऔं संसदको भंग गराइयो र नयाँ चुनाव करवाए गए। निर्वासित ग्औ । एघारौ तिब्बती संसदको सदस्यहरूको चुनाव भारत तथा दुनियाको ३३ देशहरूमा बस्ने तिब्बति को एक व्यक्ति एक मतको आधारमा भयो। धर्मशालामा केन्द्रिय निर्वासित तिब्बती संसदमा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित कुल ४६ सदस्य हो।
१९९२ मा दलाई लामाले यो घोषणाको कि जब तिब्बत स्वतन्त्र हुनेछ त उसपछि सबै भन्दा पहिलो लक्ष्य हुनेछ कि एक अन्तरिम सरकारको स्थापना गर्न जसको पहिलो प्राथमिकता यो हुनेछ तिब्बतको लोकतांत्रिसंविधानको प्रारूप तैयार गर्न र उसलाई स्वीकार गर्नको लागि एक संविधान सभाको चुनाव गर्न। यसपछि तिब्बती मान्छे आफ्नो सरकारको चुनाव गर्नेछन् र दलाई लामा आफ्नो सबै राजनीतिक शक्तिहरू नवनिर्वाचित अन्तरिम राष्ट्रपतिको सुम्पिनू हुन्छ । २००१ मा दलाई लामाको परामर्शमा तिब्बती संसदले निर्वासित तिब्बती संविधानमा संशोधन गरे र तिब्बतको कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रावधान गरे। निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कैबिनेटको सहयोगिहरूको नामांकन गर्दछ र उनको नियुक्तिको लागि संसद देखि स्वीकृति लिन्छ। पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले सेप्टेम्बर २००१मा कार्यभार ग्रहण गरे।
शांति प्रयास[सम्पादन गर्ने]
१९८७ मा परम पावन दलाई लामाले तिव्व्ती मुद्धाको शान्तिपूर्ण समाधानको लागि पांच सूत्रीय शांति योजना प्रस्तुत गरे । तर चीनले दलाई लामा द्वारा राखिएको विभिन्न शांति प्रस्तावको कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
पांच सूत्रीय शांति योजना --
२१ सेप्टेम्बर, १९८७को अमेरिकी कांग्रेसको सदस्यहरूलाई संबोधन गर्दै परम पावन दलाई लामाले निम्न ५ बुँदे शान्ती प्रस्ताव राखे :
१. सम्पूर्ण तिव्व्तलाई शान्ती क्षेत्र घोषणा गरियोस ।
२.चिनले जनसङ्ख्या स्तान्तरणको रणनिति परित्याग गर्दै तिव्व्ती लोक जीवनको सम्मान गरियोस ।
३.तिव्व्ती जनता को मानवाधिकार र लोक्तान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चता गरियोस ।
४.तिब्बतको प्राकृतिक पर्यावरणको संरक्षण तथा पुनरूद्धार गरियोस र तिव्व्तलाई कुनै पनि सैन्य हतियार निर्माण र भण्डारणको केन्द्र नबनाईयोस ।
५. तिब्बतको भविष्यको स्थिति र तिब्बत तथा चीन सम्बंधोको बारे गंभीर वार्ता शुरू गरियोस ।
दलाई लामाको लोकप्रियता[सम्पादन गर्ने]
हर तिब्बती दलाई लामा सँग गहरा तथा अकथनीय जुडाव राखिन्छ। तिब्बतियहरूको लागि समूचे तिब्बतको प्रतीक हों: भूमिको सौंदर्य, उनको नदिहरू तथा पोखरीहरूको पवित्रता, उनको आकाशको पुनीतता, उनको पर्वतहरूको दृढता र उनको मान्छेको तागत का। तिब्बतको मुक्तिको लागि अहिंसक संघर्ष जारी राखन हेतु दलाई लामाको वर्ष १९८९ को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान गरियो। उनले लगातार अहिंसाको नीतिको समर्थन गर्न जारी राखएको छ , यहां सम्म कि अत्यधिक दमनको परिस्थितिमा भी। शांति, अहिंसा र हरेक सचेतन जनावरको खुशीको लागि काम गर्न दलाई लामाको जीवनको बुनियादी सिधांत छ। त्यो वैश्विक पर्यावरणीय समस्याहरूमा पनि चिंता प्रकट गरी रहछन। दलाई लामाले ५२ भन्दा अधिक देशहरूको दौरा गरेको छ र धेरै प्रमुख देशहरूको राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रियों र शासकबाट मिले छन्। उनले धेरै धर्मको प्रमुखों र धेरै प्रमुख वैज्ञानिकबाट भेटको छ।
को शांति संदेश, अहिंसा, अन्तर धार्मिक मेलमिलाप, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व र करूणाको विचारहरूलाई मान्यताको रूपमा १९५९ देखि अब सम्म उनको ६० मानद डक्टरेट, पुरस्कार, सम्मान आदि प्राप्त भएका छन्। ले ५० भन्दा अधिक पुस्तकहरू लिखीं छन्। आफुलाई एक साधारण बौध भिक्षु नै मानछन। दुनियाभरमा आफ्नो यात्राहरू र व्याख्यानको समयमा उनको साधारण तथा करूणामय स्वभाव उनबाट मिलन वाला हरेक व्यक्तिको गहिराई सम्म प्रभावित गर्दछ। उनको संदेश छ प्यार, करूणा र क्षमाशीलता।
दलाई लामाको संदेश[सम्पादन गर्ने]
दलाई लामाको संदेश निम्नलिखित हो :-
आजको समयको चुनौतीको सामना गर्नको लागि मनुष्य लाई सार्वभौमिक उत्तरदायित्वको व्यापक भावनाको विकास गर्नु पर्छ। हामी सबैलाई यो सिकने आवश्यकता हो कि हामी न केवल आफ्नो लागि कार्य गर्नुहोस बल्कि पुरा मानवताको लाभको लागि कार्य गर्नुहोस। मानव अस्तित्वको वास्तविक कुंजी सार्वभौमिक उत्तरदायित्व नै छ। यो विश्व शांति, प्राकृतिक संसाधनहरूको समवितरण र भविष्यको पीढीको हितहरूको लागि पर्यावरणको उचित देखभालको सबै भन्दा राम्रो आधार छ।
बौद्ध धर्मको प्रचार - मेरो धर्म साधारण छ, मेरो धर्म दयालुता छ।
आफ्नो पर्यावरणको रक्षा हामिलाई त्यसै तरिका देखि गर्नु पर्छ जस्तो कि हामी आफ्नो घोडोंको गर्छन। हामी मनुष्य प्रकृति देखि नै जन्मे हो यसैले हाम्रो प्रकृतिको बिरुद्ध जानेको कुनै कारण हैन बनता, यस कारण नै म कहता हूं कि पर्यावरण धर्म नीतिशास्त्रा या नैतिकताको मामला छैन। यो सबै यस्तो विलासिताहरू हो जसको बिना पनि हामी गुजर-बसर गर्न सक्छन् तर यदि हामी प्रकृतिको विरफ जान्छन् त हामी जिउँदो हैन रह सकते।
एक शरणार्थीको रूपमा हामी तिब्बती मान्छे भारतको मान्छेको प्रति संधै कृतज्ञता महसूस गर्छन, न केवल यसैले कि भारतले तिब्बतियोंको यस पीढीको सहायता र शरण दिए छ, बल्कि यसैले पनि धेरै पीढियों देखि तिब्बती मान्छेले यस देशले पथप्रकाश र बुधमित्ता प्राप्तको छ। यसैले हामी संधै भारतको प्रति आभारी रहछन। यदि सांस्कृतिक नजरिए देखि देख्यो जाए त हामी भारतीय संस्कृतिको अनुयायी छन्।
हामी चीनी मान्छे या चीनी नेताहरूको विरुद्ध हैन हो आखिर उनी पनि एक मनुष्यको रूपमा हाम्रो भाई-बहन छन्। यदि उनलाई आफू निर्णय लिने स्वतन्त्रता होती त उनी आफुको यस प्रकारको विनाशक गतिविधिमा हैन लगाते या यस्तो कुनै काम गर्दैनन् जसबाट उनको बदनामी होती हो। म उनको लागि करूणाको भावना रखता हूँ।
परम पावन दलाई लामाको जालस्थल (अङ्ग्रेजी में)
विकिमिडिया कमन्समा चौधौं दलाई लामा सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=चौधौं_दलाई_लामा&oldid=1044452" बाट अनुप्रेषित